15 mpanakanto ankehitriny manintona sy manafintohina
Mpanakanto fanta-daza amin'izao fotoana izao izay tsy nanana bushes sy loko ampy mba hanehoana fahalalahana, dia mankasitraka sy manafintohina ny asany fotsiny ihany, fa koa ny fomba namoronany azy ireo.
Loko, pensilihazo, borosina sy lamba firakotra - izany rehetra izany dia mila mamorona asa tanana mahavariana ianao. Ah, eny, talenta bebe kokoa! Amin'ireo mpanakanto ireo dia tsy isalasalana fa izy. Raha ny marina, tsy mila ny fitaovana mahazatra izy ireo hanoratra singa tsy mahazatra. Diniho izay mety hitranga raha manaiky sary ny génie.
1. Karazana jiro avy any Tarinan von Anhalt
Ny Princess avy any Florida Tarinan von Anhalt dia tsy mampiasa biriky ho an'ny sariny. Izy ireo dia nohariana miaraka amin'ny fanampian'ny ... fiaramanidina. Ahoana no anaovany izany? Raha ny marina, nanipy tavoahangy tsotra fotsiny ilay mpanakanto, ary ny lozam-pifamoivoizana amin'ilay fiaramanidina dia "mamorona" loko iray miavaka eo amin'ny lamba. Ilaina ve ny mieritreritra zavatra toy izao? Saingy ny zavakanto jery dia tsy ny heviny. Ny teknikan'ny fiaviana zavakanto amin'ny jet "nampindrana" ny vadiny Jurgen von Anhalt. Ny famoronana ireny sary ireny dia tsy dia tsotra loatra, ary indraindray mety hampidi-doza ho an'ny fiainana: ny haavon'ny rivotra dia mahatratra haingana sy hery be dia be, azo ampitahaina amin'ny rivotry ny rivo-doza, ary ny hafanan'ny rivo toy izany dia mety hihoatra ny 250 degre Celsius. Ny risika, miaraka amin'ny famoronana, dia mamela ny printsy handray 50.000 dolara ho an'ny iray amin'ny zavatra noforoniny.
2. Ani Kay sy fijaliana ara-javakanto
Ny kopia iray amin'ny sary hosodoko avy amin'ilay mpanakanto indiana "Last Supper" an'i Leonardo da Vinci, Ani Kay dia nanoratra ny fiteniny. Ny felana dia nampiasa ny ankamaroan'ny olona. Vokatry ny famoronana nandritra ny taona maro dia nanala ny vatany hatrany i Ani, nahitana ny soritr'aretin'ny tosi-drà: loha, fihinanan-kena ary fahalemena. Saingy ilay Indy kiriah dia vonona ny hanaiky fijaliana noho ny zavakanto indray.
3. Sary feno sary avy amin'i Vinicius Quesada
Vinicius Quesada - mpanakanto breziliana manala baraka, izay manana ny rany amin'ny heviny ara-bakitenin'ny teny dia omena azy amin'ny rany sy .... Tafatafa misy loko telo amin'ny loko Breziliana no mijoro ho an'ny tenany manokana: isaky ny 60 andro dia 450 mililara ofin'ny Blanc Vinicia no mamela sary hosodoko izay manafintohina sy manafintohina ny vahoaka.
4. Ny asa fanasitranana ataon'i Lani Beloso
Ary ankoatra izany - ra. Tsy manaiky loko koa ny mpanakanto Hawaiana. Ny sary hosodoko dia noforonina tamin'ny ran'ny reny izy. Na inona na inona hafahafa mety hitranga, ny tenan'i Lani dia tena vehivavy, inona no azoko lazaina eto. Ary nanomboka izany rehetra izany noho ny fahakiviana. Raha vao manapa-kevitra ny hamantatra ny habetsaky ny famonoana ny ra izy mandritra ny fikarakarana ny taovam-pisefoana, dia nanomboka nandoko ny sarin'ny fialantsiny manokana izy indray mandeha. Nandritra ny taona iray nandritra ny vanim-potoana iray dia nanao toy izany koa izy, ka namorona andalan-tsarimihetsika 13.
5. Ben Wilson sy Masterpieces Chewable
Ilay mpanakanto ben Wilson avy ao Londres dia nanapa-kevitra ny tsy hampiasa sary hosodoko na herisetra mahazatra ary nanomboka nanamboatra sarin'ny kiboridiny manokana, izay hitany teny an-dalamben'i Londres. Ny famoronana haingon-tsoratry ny "mendri-tsakafo" dia manamboatra ny loko maitso ao an-tanàna, ary ao amin'ny portfolio'i Ben - sary avy amin'ny sary tsy mahazatra.
6. Ny mpihetsika dia miasa avy amin'i Judith Brown
Ity mpanao sary ity dia miala fotsiny, mamorona sary tsy mahazatra momba ny vongan-dranomamy sy rantsana kely, tsy mihevitra akory ny asany ho toy ny zavakanto. Fa ny rantsan-tanana fa tsy bosaka sy arintany fa tsy loko - tsy mahazatra loatra ary, hitanao, tsara tarehy. Tsara tarehy sy ny lohatenin'ny loko maromaro nataon'i Judith - Vovoka diamondra.
7. Artista Toniziana Paolo Troilo
Ny tompon'ny monochrome ihany koa dia naka rantsantanana mampiasa loko acrylic. Raha vantany vao nahita mpandraharaha Italiana mahomby, dia fantatra fa i Italia no namorona an'i Italia tamin'ny taona 2007. Raha tsy misy biriky tokana, izy dia manoratra sarimihetsika tena izy izay indraindray tsy afaka manavaka ny sary mainty sy fotsy.
8. Karazan-tsarimihetsika lehibe an'ny Jan Cook
Tsy mahagaga raha milaza izy ireo fa ny zaza rehetra dia samy miaina zazakely avokoa. Ny tanora iray mpanao hosodoko avy amin'ny UK Jan Cook dia fanamafisana an-tsaina azy io. Manoratra sary izy, toy ny milalao milina eo amin'ny fitantanana. 40 sary hosodoko marevaka miaraka amin'ny endriky ny fiara novolavolaina tamin'ny alalan'ny fampiasana loko, fa raha ny solosaina eo an-tànan'ilay mpanakanto - mifehy ny kilalao fampiasa amin'ny kodiarana.
9. Otman Toma ary zavakanto matsiro
Ny sary toy izany dia te-haka sy hilentika ihany. Satria tsy nanoratra azy ireo tamin'ny loko izy ireo, fa tamin'ny tena gilasy tena izy. Ny mpamorona sarimihetsika "mahandro malefaka" toy izany - Baghdad Otman Tom. Voaforona amin'ny alikaola ny mpanakanto naka sary ny asa vita nataony miaraka amin'ny "loko": orange, berry chocolate.
10. Elisabetta Rogai - ny fanatsarana ny divay efa antitra
Ny loko maoderina ho an'ny zavaboariny dia nampiasain'ny artista Italiana Elisabetta Rogai koa. Ao amin'ny arsenal azy - fotsy sy fotsy ary fotsy. Inona no vokatr'izany? Ny sary hosodoko tsy mampino, izay manova ny volony amin'ny fotoana, tahaka ny faharetan'ny divay efa ela dia manova ny tsirony sy ny tsirony. Asa mivantana!
11. Saripikan'i Hung I
Inona no mety ho ratsy kokoa ho an'ny tompovavy fakan-tahaka noho ireo sombina kafe kafe eo amin'ny lamba fotsy hoditra? Saingy, toa ny mpanakanto Shanghai Hun Y dia tsy tompom-pahefana fakan-tahaka. Rehefa mamorona sary hosodoko izy, dia mamela toerana toy izany eny amin'ny lampihazo. Ary tsy noho ny tiany hisotro amin'ny kafe mandritra ny asa, fa noho izany fomba izany, tsy mampiasa pensilihazo na loko, dia mandoko izy.
12. Sary hosodoko sy Bir Art avy amin'i Karen Eland
Ilay mpanakanto Karen Eland koa dia niezaka ny hampiasa kafe fa tsy loko. Ary izany no nataony tsara. Ny famoahana ireo asa malaza, vita amin'ny ranon-kafe, dia tahaka ny sary tena izy. Ny fahasamihafana tokana dia mofomamy marika sy marika iray avy amin'i Karen amin'ny endriky ny kaopy kafe amin'ny asa tsirairay.
Nanao fanandramana niaraka tamin'ny liquor, ny labiera ary ny dite (tsia, tsy nisotro azy ireo izy), Eland dia namintina fa ny sarin'ny labiera dia nivoaka tsara indrindra. Ny tavoahangin'ny zava-pisotro misy alikaola amin'ny labasy iray dia manolo ny akorandriakan'ny mpanakanto.
13. Kisses avy amin'i Natalie Irish
Ilaina tokoa ny mitia zavakanto ka tsy mitsahatra mamorona, manoroka ny asanao ankehitriny! Izany karazana fahatsapana izay tsapan'i Natalie Irish izany. Fitiavana lehibe - raha tsy izany dia tsy hanonona ny sary hosodoko ianao, tsy nosoratana tamin'ny borosy sy ny loko, fa tamin'ny molotra sy ny lipstick. Antenaina vitsivitsy amin'ny lipstick, zato am-polony vitsivitsy - ary ireo dia sangan'asa.
14. Kira Ein Varsedzhi - tratra fa tsy bosotra
Ilay Amerikana Cyrus Ein Varsedzhi dia nametraka fitiavana be tamin'ny zavakanto - nosoratana tao anaty tratra ny sary hosodoko mahagaga. Firy ny loko nandatsaka ilay artista teo amin'ny tratrany, sarotra ny mieritreritra. Saingy tsy tsinontsinona!
15. Firaisana ara-nofo avy amin'ny Tim Patch
Maka sary hosodoko izy, loko, fa tsy misy biriky. Ary araka ny eritreritrao, manoratra mpanao asa tanana aostralianina ve ny sariny? Eny, amin'io toerana io, izay tsy saro-kenatra mihitsy. Ny fahamendrehan'i Tim - izany no izy. Farafaharatsiny, ny sary nosoratan 'ny penis, dia mahatalanjona izy. Tsy maintsy milaza aho fa toy ny fitaovana fanoratana, ny mpanakanto dia tsy ny lahy no tena lahy, fa ny "fahadimy" ihany koa. Miaraka amin'ny fanampiany, i Tim dia mametraka ny anton'ilay sary. Ilay tompony mihitsy aza dia tsy mandray ny fahaizany mamorona, ary na ny solon'anarany aza dia tsy matotra - Prikasso. Raha manahaka ny hafanam-po manaitra an'i Picasso, dia nanafintohina ny mpitsidika fampirantiana ny mpitsidika fa tsy ny sary fotsiny ihany, fa ny fahitana ny fizotry ny voary.
28 sary mareva-doko izay maherin'ny 100 taona
16 zavatra tsy ampoizina momba ilay sarimihetsika "Snow White ary ny Seven Dwarfs" ho fanomezam-boninahitra ny faha-80 taonany!
Nantsoina ny asa izay hanampy ny vehivavy hahazo ny volany voalohany amin'ny voalohany ary haingana!
Ilay mpaka sary dia nametraka an'i Barbie sy i Ken tao amin'ny tranom-panjakana kominista Sovietika, ary nipoitra ho sangan'asa izany!
Fahazarana vehivavy vavy, izay vonona ny hamono antsika!
Lehilahy teraka tsy misy rantsana, lasa mpaka sary matihanina
Ny afobe ny perfectionistista: sary 31 izay manimba ny firindran'ity izao tontolo izao ity
Ohatra 8 izay nanamafy fa tsy misy ny raharaha tsara dia mbola tsy voasazy
Ny fitiavana, toy ny nofy: hitondra anao amin'ny ranomaso ireo 30 amin'ireo romantika ireo!
Olana 20 no atrehin'ny olona tsy ankasitrahana
20 tsiambaratelo tsy manam-petra amin'izao androntsika izao
Fantaro ny voalohany: 40 zava-misy mahaliana momba ny mpankafy
Ahoana ny fihinanana amin'ny dite?
Leopard frenzy, na 35 mods izay tia loko printy!
Fanamboatra vita amin'ny hazo
Mariah Carey sy James Packer nanambara ny fampakaram-bady ho any amin'ny nosin'i Barbuda
Tavy mahaleo vita amin'ny polypropylène
Ny akanjon'ny firenena Belarosiana
Tandy Newton dia niresaka momba ny fanorisorenana ara-nofo an'ilay tale
Ny fiainan'ny mpianatr'i Holland Rodin mpilalao sarimihetsika
Bronchitis mahery amin'ny ankizy
Icon "Troučuchica" - midika inona, inona no manampy?
Bibikely novonoina tamin'ny tsaramaso sy voatabiha
Rehefa manangona tongolobe eny an-kalamanjana - fitsipika manan-danja amin'ny fambolena
Fofomamy frantsay ho an'ny vehivavy
Taonan'ny alika - toetra
Veigela - fialofana amin'ny ririnina
Kim Kardashian sy Paris Hilton
Fampivelarana ny maha-izy an'ilay zazalahy
"Atsaharo ny siramamy"
Nahita ny zanany vavy Tom Cruise i Tom Cruise ary nanosihosy romana vaovao
Fiaramanidina amin'ny fiarandalamby